म केपि ओलिको हनुमान किन? – Narayani Dainik
म केपि ओलिको हनुमान किन?
शैलेस बिम्ब । जेष्ठ १।
बिगत लामो समय देखीको राजनीतिक अस्थिरता पछी नेपाली आकाशमा एउटा आशाको किरण देखा पर्यो । यति ठुलो जनमत प्राप्त सरकार थियो थिएन याद छैन। यतिखेर कोरोनाको चर्चा भन्दा राष्ट्रियताको चर्का व्यापक भएको छ। बिगतमा जुन जुन सरकार आएपनी हाम्रो सार्बभौमसत्ताको रक्षा गर्न असक्षम साबित भएको पाइन्छ ।
यदि हामीले लोकतन्त्रको मर्म र जनमतको महत्त्व बुझेका छौ भने हालको के पि ओलीको सरकार ५ बर्षका लागि ठुलो जनमतको साथ सरकारमा छ। यो समय देशको मुहार फेर्ने ठूलो अबसर हो। यस्तो बेला दुरगामी निर्णय गर्ने ,पुरानो समस्याको पुनरावलोकन गर्ने, देशलाई आर्थिक, सामाजिक समृद्धि तर्फ लैजान ल्याकत वा जनमत प्राप्त सरकार छ । यस्तो अवस्थामा छिमेकी मुलुक भारत र चीन अत्तालिएका छ्न।
के पि ओलीले लिएको राष्ट्रियताको अडान र इच्छाशक्ति गर्दा हाम्रो मुलुकले अन्य देश सङ्को सम्बन्ध बिस्तार ,थप नाका खोल्ने, तेल आयातमा सहजता आदि महसुस गर्दै छौ। यस्तो एतिहासिक काम पूर्वप्रधानमन्त्री मरिचमान बाहेक अरुले गरेको कमै होला।
के पि ओलीप्रती आशाबादी हुनुको पछाडि जनमत, दृढ़ इच्छा शक्ति रास्ट्रीयताको अडान, उनलेे हाल गरेको काम हरु आदि हुन। यो सन्जोग फेरि आउला न आउला भन्न् सकिन्न । यीनकै पालामा ठुलो ठुलो भ्रष्टाचारको काण्ड बाहिरीयो । स्मरण रहोस् “भयो होइन बाहिरीयो “। नेपाली राजनीतिमा प्रभाव पार्ने अर्को तत्व “आश र त्रास” पनि हो । जीवनकाल को उत्तरार्धमा यो तत्वले उनलाइ कुनै महत्व राख्दैन र हाल उनमा त्यस्तो कुनै ब्यतिगत महत्वाकांक्षा पनि देखिदैन ।
प्रतिकुल स्वास्थ अवस्थामा पनि १८ घन्टा खट्नु पर्ने कुनै बाध्यता छैन । छ त केबल बिगतका दाग धब्बा पखाल्ने र पुन्य कमाउने । के उनको पाप-पुन्य को लागि पुरै देश होमिनु त ? त्यो पनि होइन। उनले गरेका राम्रो काम को प्रसंशा र गलत काम को खबरदारी आजको आवश्यकता हो । उनलाई अस्थिर र पदच्युत गर्न सारा विपक्षी सत्ता पक्ष हुदाहुदै मन्त्रीमण्डलका केही सदस्य पनि लागि परेका छ्न।
यसको ज्वलन्त उदाहरण उनको भन्ने गरेको ” मलाई यो बिषयमा जानकारी गराइएन”। एउटा ब्यक्ती सबै कुरामा जानकारि राख्न सक्दैन । उनलाई आफ्नै सहयोगिबाट असहयोग छ। यस्तो बेला हिम्मतका साथ उनी भन्दै छ्न ” मलाई जानकारी गराइएन” यो ऐतिहासिक शब्द हो। मलाई कुनै प्रधानमन्त्री ले यस्तो शब्द प्रयोग गरेको याद छैन ।
प्रधानमन्त्रीको एउटै आशा भनेको जनता हुन। जनताकै सहयोग र समर्थनले नाकाबन्दीको समयमा पनि ऐतिहासिक निर्णय गर्न सक्षम भए । अहिले त्यही सहयोग र समर्थनको भिख मागी रहेका छ्न । तर समृद्धि बिरोधि देशीविदेशी तत्वले सुरु देखिनै अस्थिरता पैदा गरि रास्ट्रको अहितमा लाग्न यो वा त्यो जाल फ्याकि रहेको छ। जब समाज अस्थिर हुन्छ ,अलोकप्रिय शब्द जस्तो हत्याहिंसा ,बलात्कार ,भ्रष्टाचार आदि शब्द लोकप्रीय लाग्छ । यस्तै बेलामा अस्थिरता पुजारीले नियोजित तरिकाले जाल फाल्ने गर्दछ्न र समाज विभाजित भइ देशलाई दुरगामी रूपमा हानी हुने निर्णय हुनसक्छ । अबको ५ बर्ष के। पि। ओलि लाई काम गर्न दिउँ । सहयोग र समर्थन गरुँ । सिमाविवाद को समाधान गर्न अरु सँग क्षमता, जनमत र इच्छाशक्ति छैन।
सुनचांँदी व्यवसायीद्धारा दैनिक २५० जना सम्मलाई खाना